आर्न भ्याली: प्रकृति र हिउँ रोमानेस्क कलाको साथ | Absolut यात्रा
लुइस मार्टिनो | | España
भिल्ला र अरन उपत्यका
आर्न भ्याली एक स्पेनिश क्षेत्र हो जसको आफ्नै व्यक्तित्व रहेको छ। यो पूर्ण छ केन्द्रीय pyrenees। वास्तवमा यसको thirty० प्रतिशत क्षेत्र भित्र छ दुई हजार मिटर उचाई भन्दा बढी र यसको उत्तरी भाग एक सीमा को रूप मा कार्य गर्दछ फ्रान्स। दक्षिण र पश्चिममा यो जोडिन्छ Catalonia (जससँग यो सम्बन्धित छ) र एरागेन क्रमशः, जबकि पूर्व मा यो Lleida क्षेत्र को साथ गर्दछ Pallar Sobirá.
अरन उपत्यकाको जटिल कथाले यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्‍यो कि यसले सँधै केही मात्रामा स्वायत्तता कायम राख्यो (जाडोमा यो स्पेनको बाँकी ठाउँबाट अलग गरिएको थियो) र दक्षिणी फ्रान्सको ओसीटान भाषाबाट आएको आफ्नै बोली पनि विकसित गरेको छ। अरनिज। तर यदि यो क्षेत्र केहि को लागी बाहिर खडा, यो यसको प्रभावशाली र अद्भुत प्रकृति को लागी संगै हो स्की गर्ने रेसोर्ट बाकिरा-बेरेटको साथ साथै यसको विशाल स्मारक सम्पदाको लागि। पछिल्लो भित्र, असंख्य रोमान्सक मन्दिरहरू त्यो यसको-thirty स्थानहरुमा छरिएका छन। यदि तपाईं अरन उपत्यका जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई हाम्रो अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 अरन उपत्यकामा के हेर्ने र के गर्ने
1.1 Viella, अर्न उपत्यका को राजधानी
1.6 Bausen, Aran घाटी को अतीत मा एक यात्रा
1.8 अरुन उपत्यकाका अन्य शहरहरू
2 अरुन घाटीको ग्यास्ट्रोनोमी
3 तपाईको लागि अरान उपत्यका भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय के हो
4 अरन उपत्यकामा कसरी पुग्ने
अरन उपत्यकामा के हेर्ने र के गर्ने
यस क्षेत्रको राजधानी हो भिएला, जो यो फ्रान्स संग रोड बाट संचार गर्दछ। तसर्थ, हामी शहरको किनारमा अवस्थित यस शहरको माध्यमबाट हाम्रो यात्रा सुरु गर्दैछौं गरोन्ने नदी, र त्यसपछि अरूसँग निरन्तरता दिनुहोस् जुन भेट्न लायकको छ। तिनीहरू सबैले लिलेडा पहाडको परम्परागत शैलीलाई जवाफ दिन्छन्, ढु stone्गाका घरहरू र साँघुरो र ठाडो सडकहरूमा स्लेटका छानाका साथ।
Viella, अर्न उपत्यका को राजधानी
चार हजार मात्र बास गर्ने यो सानो सहर ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र यो यसको धेरै स्मारकहरुमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। आफ्नै पुरानो सहर यो आफैंमा छ, यसको मध्यकालीन घरहरू र साँघुरो सडकहरूसँग।
थप रूपमा, यो मा छ सान मिगुएलको गिर्जाघर, १२ औं र १ XNUMX औं शताब्दीको बीच निर्मित तथाकथित अरनिस गोथिकको एक सुन्दर नमूना। र यसको छेउमा, अन्य धेरै मन्दिरहरू जुन सबैभन्दा वास्तविक प्रतिक्रिया दिन्छन् कातालान रोमान्स्क। हामी चर्चहरू जस्तै स्यान मार्टेन डे औबर्ट, सान पेड्रो, सान्तो तोमेस वा सान मार्टेन डे गौसाच जस्ता चर्चहरूको बारेमा कुरा गर्छौं।
सन्त मार्टे डे गौसाकको चर्च
जे होस्, यदि तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि अरन सहरमा जीवन कस्तो थियो, तपाईले प्रवेश गर्नुपर्नेछ उपत्यका संग्रहालय, एउटा एथनोग्राफिक रत्न फेला पर्‍यो जनरल मार्टिनहोन टावर, सत्रहौं शताब्दीमा निर्माण एक मनोर घर। र, यदि तपाईं यो पूरक हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ ऊन संग्रहालय, जुन क्षेत्रको विकासमा कपडा उद्योगको महत्त्व प्रतिबिम्बित गर्दछ।
अर्कोतर्फ, यदि तपाइँ स्कीइ like मनपराउँनुहुन्छ, तपाईंसँग Viella la सँग धेरै नजिक छ बाकिरा-बेरेट स्टेशन, सहित यस खेलका सबै प्रकारका लागि एक सय किलोमिटर भन्दा धेरै ट्र्याकहरू सहित हिउँ बोर्ड.
अर्कोतर्फ, यदि तपाईं पैदल यात्रा जस्तो सजिलो केहि चाहानुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो जान्न चासो हुनेछ कि भोला नगरपालिका पूर्ण रूपमा छ Aigues Tortes राष्ट्रीय पार्क र सैन मौरिसियो ताल, एक असाधारण वातावरणीय धनको साथ एक विशाल अग्लो पहाडी क्षेत्र। तपाईं यस मार्फत बिभिन्न मार्गहरू गर्न सक्नुहुनेछ, तर ती सबैमा तपाईं हिमालय तालहरूको असाधारण परिदृश्य देख्नुहुनेछ जस्तो कि टोर्ट डी रियस र उच्च चुचुराहरु जस्तै पेगुरो पीक, मोन्टार्डो वा महान जादूगर.
ती मार्गहरू मध्ये, तथाकथित आगो कारहरु, जुन पार्कको रिफ्यूज भ्रमण गर्ने समावेश गर्दछ र कि तपाईंले धेरै दिनमा गर्नुपर्नेछ, किनकि यो fifty-किलोमिटर लामो छ र thousand हजार मिटर जम्मा असमानता छ।
यो शहर प्रशासनिक केन्द्र हो उच्च Aranजुन अघिल्लोको साथ यो यस अद्भुत क्षेत्रमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो। सलाार्डे छ सय बासिन्दाहरूको सानो शहर हो जुन तथापि, सुविधायुक्त स्थानमा रहेको छ, बाकिरा-बेरेटबाट केवल चार किलोमिटर टाढा र यसका वरिपरिका चुचुराहरूले घेरिएको छ। मौबरमे वा बचाउने.
तर सबैभन्दा मुख्य कुरा यो हो कि अरन उपत्यकाको यो सानो शहरमा एउटा धन हुन्छ। यो बारे मा छ सैन एन्ड्रेसको रोमनस्क चर्च, १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित। बाहिरबाट, प्रभावशाली पक्ष पोर्टल पाँच अभिलेखहरू र अष्टभुज घंटी टावर बाहिर उभिन्छ, जुन १ XNUMX औं शताब्दीमा थपियो र बेल्फ्रीमा समाप्त हुन्छ।
मन्दिरको भित्री भागको बारेमा, यो सत्रौं शताब्दी भित्ता चित्रहरु संग सजाइएको र को नक्काशी द्वारा अध्यक्षता सलादको क्राइष्ट, १२ औं शताब्दीमा मिति र समान रूपमा रोमनस्क। अन्त्यमा, यस चर्चको छेउमा तपाईले कोकेट देख्नुहुनेछ प्लाजा मेयर, असंख्य बार र रेस्टुरेन्टहरूको साथ।
अघिल्लो शहरको एकदम नजीकमा, तपाईंले ऊहा पाउनुहुनेछ, केवल १०० बासिन्दाहरूको जनसंख्या जहाँ तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ सान्ता Eulalia को रोमान्सिक चर्च, १२ औं शताब्दीबाट, यद्यपि यसको अष्टभुज घंटी टावर १ XNUMX औं शताब्दीको हो, र Cò डी ब्रास्टेट, पुनर्जागरण अवधि बाट एक पुरानो मनोर घर।
उहाका लागि के भनियो यसले तपाईलाई यस शहरमा के हेर्ने सल्लाह दिन मद्दत पुर्‍याउँछ। योसँग केवल एक सय दश जना बासिन्दाहरू पनि छन्, र यसको पनि १२ औं शताब्दीको रोमानेस्क चर्च छ, सान पेड्रो को, र एक कुलीन घर संग, को डे पेरेजानयद्यपि यो चौधौं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो।
गारोन्ने नदीको किनारमा अवस्थित र फ्रान्सको सिमानाको नजिकै, यो सानो शहर तपाईं रमाइलोले भरिएको छ, काला छतसहित यसको परम्परागत घरहरू। यो पनि रोमान्सिक आश्चर्यको घर हो, यो मरीयाको मान्यता को चर्च, १२ औं शताब्दीमा निर्मित र सम्पूर्ण अरन उपत्यकामा सुरक्षित गरिएको एउटा। यसको एक बेसिलिका फ्लोर योजना छ र यसको उत्तर पोर्टिकोको लागि कालो संगमरमर टायम्पानम र प्यान्टोकरेटरको साथ खडा छ।
मरीयाको मान्यता को चर्च
यसबाहेक, बोसस्ट हाईकर्सका लागि सन्दर्भ बिन्दु हो। असंख्य मार्ग यसबाट प्रस्थान गर्दछन्, जस बीच तथाकथित छ वटा हर्मिटेजेसको संरक्षक र एक को अवशेष गर्न नेतृत्व गर्दछ सोला डे कास्टरको मध्यकालीन महल। यसको छेउमा रहेको एउटा गुफामा, आदिम चैपल पनि भर्खरै पत्ता लागेको छ।
Bausen, Aran घाटी को अतीत मा एक यात्रा
यो पुरानो ढु stone्गाको घरहरू र कालो स्लेट छानाको लागि अरन उपत्यकामा सब भन्दा जिज्ञासु शहरहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंलाई बीचमा महसुस गराउनेछ। मध्य युगहरू। यो अन्यथा कसरी हुन सक्छ, बाउसनको पनि अद्भुत चर्च छ, यद्यपि यो १ the औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो। यो छ त्यो सन्त पिर विज्ञापन भेंकुलाको, क्लासिक शैली fçade र यसको प्रवेश पनी छेउमा एक रोमन-युग स्टील संग।
अर्कोतिर, अर्न उपत्यकाको सानो शहर हो कार्लाकको जादू गरिएको वन, हजार बर्ष पुरानो बीच बीच, एक जादुई परिदृश्य बनाउने कोठा मा मोड्ने कि बीच बीच बीच। यो बाटोमा, तपाईं थोरै पनि देख्न सक्नुहुन्छ सान रकको हर्मेटेज.
बाउजनको पनि एक रोमान्टिक कथा छ। सन्‌ १ XNUMX २० को दशकमा, एक दम्पतीले एक अर्कालाई असाध्यै माया गर्थे, तर स्थानीय पादरीले उनीहरूसँग विवाह गर्न इन्कार गरे किनभने तिनीहरू टाढाका आफन्तहरू थिए। मैले तिनीहरूलाई यो काम गर्न ठूलो रकमको लागि सोधे र तिनीहरूसँग यो छैन।
सबै कुराको बाबजुद, उनीहरू सँगै बस्ने निर्णय गरे र उनीहरूको बच्चा भयो। तर तेह्र वर्षको उमेरमा ती महिलाको नाम टेरेसा मरे। फेरि पुजारीले उनलाई चिहानमा गाड्दैन थिए। तर यस पटक आक्रोशित बाउसेनका बासिन्दाहरूले उनलाई कब्रिस्तानको सिभिल क्षेत्रमा सबै मान सम्मानका साथ दफन गरे। त्यहाँ तपाईं अझै देख्न सक्नुहुन्छ उसको चिहान, जसमा उनीहरू भन्छन, उनका छोरा बारम्बार फूलहरू दिन्छन्।
साथै अल्टो अरनको नगरपालिकामा तपाईले यस शहर कम्तिमा पाँच सय बासिन्दाहरू भएको पाउनुहुनेछ र यसको लागि प्रसिद्ध छ तातो चिसोहरू। तिनीहरू गन्धकको छ र तपाईं सार्वजनिक रूपमा खुला स्विमिंग पूल परिसर मा तिनीहरूलाई मज्जा लिन सक्नुहुन्छ।
पछि, हामी तपाईंलाई चित्रको माध्यमबाट हिँड्न सल्लाह दिन्छौं मुख्य वर्ग शहरबाट, जहाँ तपाईं ब्रुना डे लोस पिरिनेस नस्ल गाईको स्मारक देख्नुहुनेछ। र यो पनि कि तपाइँ प्रभावशाली भ्रमण गर्नुहोस् सान्ता मारिया डे आर्टिसको रोमनस्क चर्च, पूर्ण रूपमा संरक्षित, साथै सन्त जोन को, गोथिक र अष्टभुज बेल टावरको साथ। पछिल्लो पनि एक हो संग्रहालय Aranese संस्कृति मा प्रदर्शनी संग।
अरुन उपत्यकाका अन्य शहरहरू
यद्यपि हामीले सिफारिश गरेका क्षेत्रका सब भन्दा चाखलाग्दो शहरहरू हुन्, तपाईं अन्यहरूलाई पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई पनि मनपर्दछ। उदाहरण को लागी, केनेजन, जसले तपाईंलाई उपत्यकाको एक उत्तम दृश्य प्रदान गर्दछ; ग्यारस, यसको सान जुलियनको चर्चको साथ, वा Tredos, अन्तिम एउटा बाकिरा-बेरेटमा पुग्नु अघि र जससँग एउटा होटल छ जुन केवल पैदल वा स्नोमोबाइलबाट पहुँच गर्न सकिन्छ।
अरुन घाटीको ग्यास्ट्रोनोमी
तपाईं यसको स्वादिलो ​​खाना प्रयोग गरेर अर्न उपत्यका छोड्न सक्नुहुन्न। चिसो र हिमाली क्षेत्र भएकोले, अरानिज भोजन हो बलवान र स्वादिष्ट। सामान्य उत्पादनहरूले समावेश गर्दछ: miel; को sausages सॉसेज जस्तै, साल्चिचन (जसलाई उनीहरूले बोलाउँदछन्) xolís) र बोल्ह नेरे, रगत सॉसेज को लागि एक नुस्खा; को कन्फिटोरस र चीज जस्तो कि कच्चा गाईको दुधको साथ बनेको ब्रोस्याट.
यसको अंशको लागि, उपत्यकामा विशिष्ट डिश पार उत्कृष्टता हो Aranese भाँडो, एक क्यालोरिक र धेरै स्वादिष्ट स्टू जुन ब्रोथ, पोर्क, गाईको मासु र कुखुरा, पास्ता, तरकारी र फलहरू द्वारा तयार छ। यो समान छ कासोलाडा, आलु, तरकारीहरू, र पोर्क पसल र बेकनको साथ। तपाईं पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ सिभेट, जसमा खेल मासु, प्याज, लसुन, रातो दाखमद्य, थाइम, बे पात र काली मिर्च छ। पछिल्लो को एक राम्रो उदाहरण हो सेन्ग्लर को civetजुन जंगली सुअरले बनेको छ।
अरनका अन्य क्लासिक रेसिपीहरू यो हो patarns, एक साधारण आलु सूप, एक दिन अघि रोटी, तेल र नुन; को गाला, एक घर बनाइएको मसलेको आलु; को कोकिला कुखुरा, जुन गाजर, लीकहरू, अजवाइन, लसुन र प्याज, वा संग तयार छ डक कन्फिट, फ्रान्सेली खानाबाट पैतृक सम्पन्न।
पेस्ट्रीहरूका लागि, हामी तपाईंलाई यो प्रयास गर्न सल्लाह दिन्छौं ट्रोन्केट्स, सौंफ अनाजको साथ केही फ्राइड पास्ता। र पनि coquilhons, जुन पीठो, चिनी, अण्डा र लिकुरको साथ बनेको छ। लोकप्रिय बिर्सन बिना यी सबै cresp .ts.
तपाईको लागि अरान उपत्यका भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय के हो
क्षेत्र अटलान्टिक नदी घाटी यसको ठूलो बहुमत मा पर्छ। को गरोन्ने नदी एक कठिन यात्रा बनाउन को लागी यस मार्फत चल्छ र फ्रेन्च पेट्रोल, धेरै नजिक बोर्डो। यस कारणले गर्दा, अर्न घाटीको मौसम छ एट्लान्टिक, चिसो जाडो र प्रशस्त हिउँ संग हल्का ग्रीष्म withतुका साथै पहाडमा चौध डिग्री र मैदानमा सत्रह डिग्री भन्दा बढी।
तर, मौसम भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण तपाईंलाई अरन उपत्यकामा यात्राको लागि समय सिफारिश गर्दा तपाईंको भ्रमणको कारण हो। यदि तपाइँ स्की गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँको लागि तार्किक रूपमा उत्तम समय हो जाडो या वसन्त। जहाँसम्म, तपाईले खोज्नु भएको कुरा यसको सुन्दर शहरहरू र यसको अद्भुत रोमान्सक मार्ग जान्नु हो भने, पैदल यात्राको क्रममा, तपाईंको भ्रमणको लागि सही समय यही हो गर्मी। जे भए पनि, यस अद्वितीय ठाउँ पत्ता लगाउनका लागि बर्षको सबै मौसमहरू राम्रो हुन्छन्।
अरन उपत्यकामा कसरी पुग्ने
Lleida क्षेत्रमा रेल वा एयरपोर्टबाट कुनै सञ्चार छैन। सबैभन्दा नजिकको हो Lleida र एक Tarbes, फ्रान्समा, जो क्रमशः १165 र १161१ किलोमिटर छन्। ट्रेनको सन्दर्भमा, सबैभन्दा नजिकको स्टेशन छ लुचोन, गालिक शहर जुन kilometers० किलोमिटर टाढा छ।
यसको सट्टामा, तपाईंसँग नजिकको शहरहरू जस्तै बार्सिलोना, Lleida, Zaragoza वा टरागना। तर, यदि तपाईं आफ्नै कारमा यात्रा गर्न रुचाउनुहुन्छ भने, त्यहाँ मुख्यतया तीन मार्गहरू छन्। Palilers बाट, तपाईंसँग छ रोड सी--।, जसले बोनाइगुआ पार गरेर पोन्ट डे रेको सिमानामा सम्पूर्ण उपत्यका पार गर्दछ। Ribagorza बाट, यो छ N-230 त्यो यसलाई viála सुरुnel हुँदै अर्नको साथ मिल्छ। अन्त्यमा, फ्रान्सबाट, उत्तम मार्ग त्यो हो जुन आउँछ N-125 र यो हुन्छ, मा पन्ट डे रे को माथि उल्लिखित सीमा पार गरेपछि N-230.
अन्तमा, अर्न घाटी एउटा सुन्दर क्षेत्र हो Lleida Pyrenees तपाईंसँग जित्ने सबै कुरा छ। तिनीहरूको अद्भुत गर्न पहाडी दृश्य र तिनीहरू स्की ढलानहरू यसको प्रभावको साथ एक प्रभावशाली स्मारक विरासत थप गर्दछ रोमान्सक मार्ग, र ग्यास्ट्रोनोमी जबरजस्ती यो स्वादिष्ट छ। यो सबै यसको उत्कृष्ट नबिर्सिन होटल प्रस्ताव। के तपाई उसलाई भेट्न चाहानु हुन्न?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अरन उपत्यका
मादेइरामा के हेर्ने
Absolut Viajes नि: शुल्क सम्मिलित हुनुहोस् र तपाईंको ईमेल मा यात्रा र पर्यटन को बारे मा भर्खरको समाचार प्राप्त गर्नुहोस्।